စစ်ကိုင်းနဲ့ မန္တလေးမှာ ရေဘေးဒုက္ခသည် ၃ သောင်းကျော...
22 ก.ค. 2562 - 14:45 น.
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းနဲ့ မကွေးတိုင်းတို့မှာ မြစ်ရေလျှံပြီး ရေကြီးနေတာကြောင့် ရေဘေးရှောင်နေရတဲ့ ပြည်သူပေါင်း ၃သောင်းဝန်းကျင်ရှိလာပြီလို့ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဖြူလဲ့လဲ့ထွန်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
' ' အရှေ့ဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင် သောတာပန်ရပ်ကွက်တို့ အနောက်ဘက်ကျတော့ အေးမြဝတီတို့ချင်းစုတို့ မှာ ရေကပိုများတယ်။ စစ်ကိုင်းအနောက်ဘက်က ဆင်ခြေဖုံးရွာတွေဆို ရေကတော်တော်လေးနက်တယ်။ စစ်ကိုင်းမှာရေကြီးတာက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လိုလည်းဖြစ်လာတော့ ကယ်ဆယ်ရေးကတော့ တခြားကမလာဘူး။ စစ်ကိုင်းထဲကပဲ ထမင်းထုပ်တို့ ဝေတာတို့ဘာတို့ပဲရှိကြတယ်။'' လို့ ဦးကြည်စိုးထွန်းကပြောပြပါတယ်။
อัลบั้มภาพ စစ်ကိုင်းနဲ့ မန္တလေးမှာ ရေဘေးဒုက္ခသည် ၃ သောင်းကျော်အထိရှိလာ